Antananarivo Renivohitra Manomboka mivangongo ny fako
Mbola misy mivangongo ihany ny fako eto an-drenivohitra hatramin’ny faran’ny herinandro teo, toy ny etsy Anosizato izay mamoaka fofona maimbo tokoa sady mibahan-dalana.
Ny antony raha ny fanazavana azo teo anivon’ny SAMVA ny fahasimban’ny fiarabe hampiasain’izy ireo. 16 mantsy ny isany teo aloha nefa 11 sisa ankehitriny. Miezaka ny SAMVA hanao izay ho afany hanalana ireny fako mivangongo ireny. Miantso ny mponin’Antananarivo mba hanaja ny ora fanariana fako isan’andro manomboka amin’ny 05 ora hariva ka hatramin’ny 08 ora alina izy ireo sady tsy hanaparitaka izany eny ivelany ihany koa. Tsiahivina moa fa aretina maro no aterak’ireny fako miparitaka ireny ka lohalaharana ny aretin’ny taovam-pisefoana izay tena mamely ny maro tokoa toy ny kohoka, ny gripa mahery izay mahavoa ny ankamaroan’ireo olona tonga manatona tobim-pitsaboana ankehitriny.